Mapikicha okuPhilippines (February 2014 Kusvika May 2015)
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fante Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lithuanian Luo Malay Malayalam Mam Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Oromo Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tarascan Telugu Thai Turkish Tzeltal Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Valencian Vezo Welsh Yoruba Zulu
Mapikicha okuPhilippines Chikamu 1 (February 2014 Kusvika May 2015)
Zvapupu zvaJehovha zviri kuvaka zvivako zvitsva uye kugadziridza zvagara zviripo pahofisi yebazi rekuPhilippines riri muQuezon City. Sezvo mabhuku eko ava kuprindirwa kubazi rekuJapan, muchivako chaimboprindirwa ndimo muchange mava nemadhipatimendi anotevera: remakombiyuta, rekuvaka rinonzi Local Design/Construction (LDC), reMaintenance, reShipping, uye reShanduro. Mapikicha aya anoratidza mamwe emabasa akaitwa kubva muna February 2014 kusvika muna May 2015. Basa racho rinotarisirwa kuti ringe rapera panozosvika October 2016.
Zvichange zvakaita bazi rekuPhilippines kana rapera. Zvivako zviri kuvakwa kana kuti zviri kugadziridzwa zvinosanganisira:
Chivako 4 (Dzimba Dzokugara)
Chivako 5 (Audio/Video, Service Department)
c Chivako 6 (Landscaping, Garaji Rekugadzirira Mota, Kunoitwa Basa Rekuweredha)
Chivako 7 (Makombiyuta, LDC, Maintenance, Shipping, Shanduro)
28 February 2014​—Chivako 7
Vashandi vari kuputira fiberglass kuti isakanganiswe neunyoro. Vakapfeka mbatya dzinodzivirira kuti isaenda paganda.
2 April 2014​—Chivako 7
Vashandi vari kupedzisa kugadzira sirin’i yemunorekodherwa mavhidhiyo emutauro wemasaini wekuPhilippines. Vari kusiya maburi esikweya musirin’i kuti vazoisa maHVAC diffusers ayo anopinza mhepo mukamuri racho rose.
21 October 2014​—Pabazi muQuezon City
Mushandi ari kuchera kuti vaise muchina unotonhodza mvura. Muchina wacho uchatonhodza mvura ichashandiswa pazvivako zvacho zvose zvepabazi.
19 December 2014​—Nzira yokufamba nayo iri mudenga inojoinisa Chivako 1, 5, ne7
Nzira iyi inojoinisa zvivako zvose zvikuru, kusanganisira Chivako 1, icho chine imba yokudyira. Nzira iyi ichanyanya kushandiswa nevanhu vanodarika 300 vachange vachishanda muChivako 7.
15 January 2015​—Chivako 5
Crane iri kusimudza marata. Panoshandiswa macrane akasiyana-siyana uye vashandi vakahayiwa ndivo vanoadhiraivha.
15 January 2015​—Chivako 5A
Muchivako ichi mune zvimbudzi zviviri, masitepisi uye rifiti. Kuva nezvimbudzi uye masitepisi muchivako ichi zvinoita kuti muChivako 5 musare muine nzvimbo yakakura. Uye kuisa rifiti muchivako ichi pane kuiisa muChivako 5 zvinoita kuti ruzha rwayo painenge ichikwira nekudzika rusavhiringidza zvinenge zvichirekodhwa.
Vashandi vari kuisa masimbi ekusimbisa kongireti vari pamumvuri. Muna January kazhinji tembiricha inenge iri kuma29°C uye muna April inenge iri kuma34°C.
5 March 2015​—Chivako 5
Mapuranga ari kuiswa padenga kuti rinyatsosimba. Pachivako 5 pakashandiswa mapuranga anenge 800.
17 March 2015​—Chivako 5
Kukanya kongireti. Pavanhu vari kuita basa rekuvaka mahofisi aya pane vashandi vanodarika 100 vanobva kuAustralia, Canada, France, Japan, New Zealand, South Korea, Spain, United States, uye kune dzimwe nyika.
25 March 2015​—Chivako 5
Kuisa marata padenga reChivako 5, chaimbova nemahofisi eDhipatimendi reShanduro. Chivako chacho chiri kugadziridzwa kuti chizoshandiswa nedhipatimendi reAudio/Video uye Service Department.
13 May 2015​—Chivako 5
Mushandi ari kucheka simbi dzichazoshandiswa pakugadzira madziro emahofisi.
Chikamu 2 Chemapikicha ekuPhilippines (June 2015 - June 2016)